SME Specialist | Yoma Bank
ခြေးငှေ Customer အသဈမြား ရှာဖှခွေငျး၊ ရိုးမဘဏျ၏ခြေးငှအေား အသုံးပွုထားသော Customer မြားနှငျ့ ရရှေညျဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျ တညျတံ့စရေနျ ဆောငျရှကျခွငျး အပွငျ ရိုးမဘဏျ၏ခြေးငှအေား ပွနျလညျပေးဆပျရနျ ပကျြကှကျနသေော Customer မြားထံမှလညျး ကွှေးကနျြမြား ကောကျခံခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျနိုငျရမညျ။ Customer မြား၏ လုပျငနျးသဘာဝနှငျ့ ကိုကျညီမှုရှိသညျ့ ခြေးငှအေမြိုးအစားကို အကွံပွုရောငျးခနြိုငျရမညျ။ ခြေးငှမြေားကို လလေ့ာအကဲဖွတျပွီး၊ အရညျအသှေးကောငျးမှနျသော ခြေးငှမြေား ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျရမညျ။ လကျရှိ SME ခြေးငှေ Customer မြားကို အကောငျးဆုံး ဝနျဆောငျမှုပေးပွီး Customer အသဈမြားကိုလညျး Management ညှနျကွားခကျြမြားအတိုငျး ရှာဖှနေိုငျရမညျ။
Sales & Client Relationship Management (50%)
မိမိတို့ တာဝနျကရြာ ဒသေရှိ ဈေးကှကျအား လလေ့ာကာ Daily and Weekly Outbound Sales Plan မြား ပွငျဆငျပွီး ဘဏျခှဲ၏ SME Goal ပွညျ့မှီနိုငျရနျ နှငျ့ လစဉျခမြှတျထားသော Sales Target ပွညျ့မှီနိုငျရနျ အတှကျ အရညျအသှေး ပွညျ့မှီသော ခြေးငှမြေား ရှာဖှရေနျ။
ဘဏျခှဲတှငျ SME ခြေးငှေ လာရောကျ စုံစမျးသော Customer မြားကို ၎င်းငျးတို့၏ စီးပှားရေး သဘာဝနှငျ့ ကိုကျညီမှုရှိသော SME ခြေးငှေ အမြိုးအစားမြားအား ရှငျးလငျးအကွုံပွုရနျ။
ခြေးငှေ အသဈရှာဖှရောတှငျ Daily Outbound Sales အပွငျ Telemarketing ၊ ကုနျသှယျပွပှဲ၊ ပွိုငျပှဲတို့နှငျ့ မိမိတို့ဒသေတှငျ ပွုလုပျသော စီးပှားရေးဆိုငျရာ အခမျးအနားတို့အားလညျး ပါဝငျကာ Business Network ကယျြပွနျ့လာရနျ နှငျ့ ရိုးမဘဏျ၏ SME ခြေးငှအေား လူအမြားသိစရေနျ ပွုလုပျရနျ။
လကျရှိခြေးငှယေူထားသော Customer မြားထံလညျး ပုံမှနျ သှားရောကျကာ ၎င်းငျးတို့၏ စီးပှားရေး လညျပတျနိုငျမှု အခွအေနအေား ကွညျ့ရှူသုံးသပျရနျ၊ ဘဏျနှငျ့ဆိုငျသော လိုအပျခကျြမြား ရှိပါက အဆငျ့ဆငျ့ တငျပွကာ ဆောငျရနျပေးရနျ နှငျ့ Customer နှငျ့ ရိုးမဘဏျအကွား ရရှေညျ ဆကျဆံရေးကို တညျတံ့ခိုငျမွဲစရေနျ ပွုလုပျဆောငျရှကျရနျ။
Customer ၏ စီးပှားရေးအနအေထား၊ ငှစေီးဆငျးမှု အနအေထား၊ ပိုငျဆိုငျမှု အနအေထားတို့အား မေးမွနျးကာ Customer မှ အမှနျတကယျ ပွနျလညျပေးဆပျနိုငျမညျ့ ခြေးငှေ ပမာဏျ၊ ပွနျလညျပေးဆပျရမညျ့ ငှပေမာဏ နှငျ့ အတိုးနှုနျးတို့အား ရှငျးလငျး ပွောကွားရနျ။
SME Customer မဟုတျသော Customer မြားအားလညျး ဘဏျ၏ အခွားဝနျဆောငျမှုမြား အသုံးပွုနိုငျရနျ အကွံပွုလမျးညှနျပေးရနျ။
နစေ့ဉျတှထေ့ားသော Customer မြား၏ စာရငျးအား စနဈတကြ ပွုစုကာ ဘဏျခှဲမနျနဂြောနှငျ့ ရုံးခြုပျသို့ အပတျစဉျပေးပို့ရနျ။
Credit Processing, Risk Management and Service Quality (20%)
Customer ၏ Character အနအေထား၊ စီးပှားရေးအနအေထား၊ ငှစေီးဆငျးမှု အနအေထား၊ ပိုငျဆိုငျမှု အနအေထားတို့အား စနဈတကြ လလေ့ာကာ Customer အနဖွေငျ့ အမှနျတကယျ ပွနျလညျပေးဆပျနိုငျသော ခြေးငှပေမာဏကိုသာ ရုံးခြုပျ SME Department and Credit Department သို့ ထောကျခံတငျပွရနျ။
ခြေးငှလြှေောကျလှာတငျရနျ လိုအပျမညျ့ အခကျြအလကျမြား နှငျ့ စာရှကျစာတမျးမြားအား ရှငျးလငျးတောငျးခံရနျ နှငျ့ Customer မှ ပေးမညျ့ စာရှကျစာတမျးနှငျ့ အခကျြအလကျမြားကိုလညျး စနဈတကြ လကျခံရနျ။
ခြေးငှေ SME SOP တှငျ ပါရှိသော လုပျဆောငျရမညျ့ လုပျငနျးစဉျ အဆငျ့ဆငျ့ကို စနဈတကြ လိုကျနာ ဆောငျရှကျရနျ။
ခှငျ့ပွုခကျြရရှိပွီးသော ခြေးငှမြေားကို Customer မြားအား အကွောငျးကွား၍ အဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ခြေးငှေ ထုတျယူနိုငျရနျ ကူညီဆောငျရှကျပေးရနျ။
ခြေးငှလြှေောကျထားမှု လုပျငနျးစဉျ တလြှောကျ ကနြေပျမှု ရရှိရနျ အကောငျးဆုံး နှငျ့ အမွနျဆုံး ဝနျဆောငျမှုပေးရနျ နှငျ့ SME ခြေးငှေ လုပျငနျးဆိုငျရာ ဆောငျရှကျခကျြမြားကို ဘဏျခှဲမနျနဂြောထံသို့ ပုံမှနျ တငျပွရနျ။
ရုံးခြုပျမှ စီစဉျသော SME Meeting မြား နှငျ့ သငျတနျးမြားတှငျ လုပျငနျး တိုးတကျကောငျးမှနျစရေနျ တကျကွှစှာ ပါဝငျဆှေးနှေး ဆောငျရှကျရနျ။
Collection Management (30%)
ရိုးမဘဏျ၏ ခြေးငှအေား ပွနျလညျပေးဆပျရနျ ပကျြကှကျနသေော Customer မြား (ကွှေးကနျြ Customer မြား) ၏ ကိုယျရေးအခကျြအလကျမြား နှငျ့ ကွှေးမွီအခကျြအလကျမြားအား Collection Management System တှငျ သိမျးဆညျးရနျ နှငျ့ ပုံမှနျမှတျတမျးတငျရနျ။
Collection Management System အား နစေ့ဉျ စဈဆေးကာ ကွှေးကနျြ Customer မြားအား ဖုနျးချေါပွီး ကွှေးကနျြ ပေးဆပျရနျ ပွောကွားရနျ။
ပထမ (၁၀)ရကျတှငျ ပေးဆပျရနျ ပကျြကှကျသော Customer မြားအား အစညျးအဝေး ချေါယူကာ ကွှေးကနျြ ပွနျလညျပေးဆပျရနျ ပွောကွားရနျ။
Customer မြားအား ပေးဆပျရနျ ပကျြကှကျရကျ (၁၅) ရကျမွောကျနတှေ့ငျ ပထမအကွိမျ သတိပေးစာပို့ရနျ၊ (၃၀) ရကျမွောကျနတှေ့ငျ ဒုတိယအကွိမျ သတိပေးစာပို့ရနျ၊ (၄၅) ရကျမွောကျနတှေ့ငျ တတိယအကွိမျ သတိပေးစာပို့ရနျ။
အစညျးအဝေးဖိတျခွငျး၊ ဘဏျမှ သတိပေးစာပေးပို့ခွငျး နှငျ့ ရှနေ့သေတိပေးစာ ပေးပို့ခွငျးအား လိုအပျသလို ဆောငျရှကျရနျ။
Customer မှ ကွှေးကနျြ ပေးဆပျမညျဟု ဂတိပွုထားခွငျးအား ပကျြကှကျပါက (သို့မဟုတျ) လိုအပျပါက Customer ထံ ကိုယျတိုငျသှားရောကျကာ ကွှေးကနျြ ပေးဆပျရနျ တိုကျတှနျး ပွောကွားရနျ။
ကွှေးကနျြ Customer မြားအား ပုံမှနျ Follow Up လုပျရနျ နှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ အခကျြအလကျမြားအား ဒသေဆိုငျရာ Collection Officer မြားနှငျ့ ပုံမှနျတိုငျပငျဆှေးနှေးကာ ကွှေးကနျြကောကျမညျ့ နညျးလမျးမြား ရှာဖှရေနျ။
ပကျြကှကျစပွုနသေော Customer မြားအား ဒသေဆိုငျရာ Collection Officer မြားအား အသိပေးကာ ခကျြခွငျး ကိုငျတှယျဆောငျရှကျရနျ။
ချေးငွေ Customer အသစ်များ ရှာဖွေခြင်း၊ ရိုးမဘဏ်၏ချေးငွေအား အသုံးပြုထားသော Customer များနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် တည်တံ့စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း အပြင် ရိုးမဘဏ်၏ချေးငွေအား ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်နေသော Customer များထံမှလည်း ကြွေးကျန်များ ကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Customer များ၏ လုပ်ငန်းသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ချေးငွေအမျိုးအစားကို အကြံပြုရောင်းချနိုင်ရမည်။ ချေးငွေများကို လေ့လာအကဲဖြတ်ပြီး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ချေးငွေများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လက်ရှိ SME ချေးငွေ Customer များကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး Customer အသစ်များကိုလည်း Management ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ရှာဖွေနိုင်ရမည်။
မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ဒေသရှိ ဈေးကွက်အား လေ့လာကာ Daily and Weekly Outbound Sales Plan များ ပြင်ဆင်ပြီး ဘဏ်ခွဲ၏ SME Goal ပြည့်မှီနိုင်ရန် နှင့် လစဉ်ချမှတ်ထားသော Sales Target ပြည့်မှီနိုင်ရန် အတွက် အရည်အသွေး ပြည့်မှီသော ချေးငွေများ ရှာဖွေရန်။
ဘဏ်ခွဲတွင် SME ချေးငွေ လာရောက် စုံစမ်းသော Customer များကို ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော SME ချေးငွေ အမျိုးအစားများအား ရှင်းလင်းအကြုံပြုရန်။
ချေးငွေ အသစ်ရှာဖွေရာတွင် Daily Outbound Sales အပြင် Telemarketing ၊ ကုန်သွယ်ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲတို့နှင့် မိမိတို့ဒေသတွင် ပြုလုပ်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားတို့အားလည်း ပါဝင်ကာ Business Network ကျယ်ပြန့်လာရန် နှင့် ရိုးမဘဏ်၏ SME ချေးငွေအား လူအများသိစေရန် ပြုလုပ်ရန်။
လက်ရှိချေးငွေယူထားသော Customer များထံလည်း ပုံမှန် သွားရောက်ကာ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး လည်ပတ်နိုင်မှု အခြေအနေအား ကြည့်ရှူသုံးသပ်ရန်၊ ဘဏ်နှင့်ဆိုင်သော လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက အဆင့်ဆင့် တင်ပြကာ ဆောင်ရန်ပေးရန် နှင့် Customer နှင့် ရိုးမဘဏ်အကြား ရေရှည် ဆက်ဆံရေးကို တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
Customer ၏ စီးပွားရေးအနေအထား၊ ငွေစီးဆင်းမှု အနေအထား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေအထားတို့အား မေးမြန်းကာ Customer မှ အမှန်တကယ် ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်မည့် ချေးငွေ ပမာဏ်၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် ငွေပမာဏ နှင့် အတိုးနှုန်းတို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားရန်။
SME Customer မဟုတ်သော Customer များအားလည်း ဘဏ်၏ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုနိုင်ရန် အကြံပြုလမ်းညွှန်ပေးရန်။
နေ့စဉ်တွေ့ထားသော Customer များ၏ စာရင်းအား စနစ်တကျ ပြုစုကာ ဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာနှင့် ရုံးချုပ်သို့ အပတ်စဉ်ပေးပို့ရန်။
Customer ၏ Character အနေအထား၊ စီးပွားရေးအနေအထား၊ ငွေစီးဆင်းမှု အနေအထား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေအထားတို့အား စနစ်တကျ လေ့လာကာ Customer အနေဖြင့် အမှန်တကယ် ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်သော ချေးငွေပမာဏကိုသာ ရုံးချုပ် SME Department and Credit Department သို့ ထောက်ခံတင်ပြရန်။
ချေးငွေလျှောက်လွှာတင်ရန် လိုအပ်မည့် အချက်အလက်များ နှင့် စာရွက်စာတမ်းများအား ရှင်းလင်းတောင်းခံရန် နှင့် Customer မှ ပေးမည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် အချက်အလက်များကိုလည်း စနစ်တကျ လက်ခံရန်။
ချေးငွေ SME SOP တွင် ပါရှိသော လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်။
ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော ချေးငွေများကို Customer များအား အကြောင်းကြား၍ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ချေးငွေ ထုတ်ယူနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
ချေးငွေလျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဉ် တလျှောက် ကျေနပ်မှု ရရှိရန် အကောင်းဆုံး နှင့် အမြန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် နှင့် SME ချေးငွေ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာထံသို့ ပုံမှန် တင်ပြရန်။
ရုံးချုပ်မှ စီစဉ်သော SME Meeting များ နှင့် သင်တန်းများတွင် လုပ်ငန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ရန်။
ရိုးမဘဏ်၏ ချေးငွေအား ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်နေသော Customer များ (ကြွေးကျန် Customer များ) ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ နှင့် ကြွေးမြီအချက်အလက်များအား Collection Management System တွင် သိမ်းဆည်းရန် နှင့် ပုံမှန်မှတ်တမ်းတင်ရန်။
Collection Management System အား နေ့စဉ် စစ်ဆေးကာ ကြွေးကျန် Customer များအား ဖုန်းခေါ်ပြီး ကြွေးကျန် ပေးဆပ်ရန် ပြောကြားရန်။
ပထမ (၁၀)ရက်တွင် ပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်သော Customer များအား အစည်းအဝေး ခေါ်ယူကာ ကြွေးကျန် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ပြောကြားရန်။
Customer များအား ပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ရက် (၁၅) ရက်မြောက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် သတိပေးစာပို့ရန်၊ (၃၀) ရက်မြောက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် သတိပေးစာပို့ရန်၊ (၄၅) ရက်မြောက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် သတိပေးစာပို့ရန်။
အစည်းအဝေးဖိတ်ခြင်း၊ ဘဏ်မှ သတိပေးစာပေးပို့ခြင်း နှင့် ရှေ့နေသတိပေးစာ ပေးပို့ခြင်းအား လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရန်။
Customer မှ ကြွေးကျန် ပေးဆပ်မည်ဟု ဂတိပြုထားခြင်းအား ပျက်ကွက်ပါက (သို့မဟုတ်) လိုအပ်ပါက Customer ထံ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ ကြွေးကျန် ပေးဆပ်ရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားရန်။
ကြွေးကျန် Customer များအား ပုံမှန် Follow Up လုပ်ရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များအား ဒေသဆိုင်ရာ Collection Officer များနှင့် ပုံမှန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ကြွေးကျန်ကောက်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရန်။
ပျက်ကွက်စပြုနေသော Customer များအား ဒေသဆိုင်ရာ Collection Officer များအား အသိပေးကာ ချက်ခြင်း ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန်။
• လူအမြားနှငျ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးမှနျရမညျ။
• သတျမှတျထားသော လစဉျ Sales Target ၊ နှဈစဉျ Sales Target မြားကို ဆောငျရှကျ လိုသောသူဖွဈရမညျ။
• အရောငျးနှငျ့ပတျသကျသော ကှငျးဆငျးအတှအေ့ကွုံရှိရမညျ။ Marketing/Site inspection/ Site Visit ဆောငျရှကျခွငျး ပွုလုပျနိုငျရမညျ။
• ရိုးသားကွိုးစား၍ ယုံကွညျစိတျခရြသောသူဖွဈရမညျ။
• Customer ၏လုပျငနျးအား ကောငျးမှနျစှာ သုံးသပျနိုငျပွီး Analytic ၊ Research နှငျ့ ပတျသကျသော တာဝနျမြားကိုလညျး လုပျဆောငျနိုငျရမညျ။
• လုပျငနျးကွောငျ့ဖွဈပျေါလာသော စိတျဖိစီးမှုမြားအောကျတှငျ ကောငျးမှနျစှာ လုပျကိုငျ နိုငျသူဖွဈရမညျ။
• အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ ကောငျးမှနျစှာ အလုပျလုပျနိုငျ၍ အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျမှု၊ ပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျမှုရှိရမညျ။
• လုပျငနျးတာဝနျမြား လုပျဆောငျရာတှငျ ပညာရှငျ (Professional) ဆနျဆနျ အလုပျလုပျနိုငျရမညျ။
• တက်ကသိုလျတဈခုမှ စီးပှားရေးဆိုငျရာဘှဲ့တဈခုခု (Bachelor of Business Management, Commerce, Finance, Accounting, Economics and/or industry specific qualifications) ၊ Diploma in Sales/Marketing ရှိရမညျ။
• ကှနျပြူတာ (MS Office – Excel, Word) နှငျ့ E-mail ကို ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုတတျ ရမညျ။
• အနညျးဆုံး လုပျသကျ (၁) နှဈရှိရမညျ။
• Sales/Marketing ဆိုငျရာအတှအေ့ကွုံ အနညျးဆုံး (၁) နှဈရှိရမညျ။
• မွနျမာဘာသာစကားကို ကောငျးမှနျစှာ ပွောဆို၊ ဆကျဆံ၊ ရေးသားနိုငျရမညျ။
• အင်ျဂလိပျစကား ပွောဆိုနိုငျသူကို ဦးစားပေးမညျ။
*ဆနျခါတငျစာရငျးတှငျပါဝငျသူမြားကိုသာ အငျတာဗြူးအတှကျ ဆကျသှယျမညျဖွဈသညျ။*
• လူအများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
• သတ်မှတ်ထားသော လစဉ် Sales Target ၊ နှစ်စဉ် Sales Target များကို ဆောင်ရွက် လိုသောသူဖြစ်ရမည်။
• အရောင်းနှင့်ပတ်သက်သော ကွင်းဆင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ Marketing/Site inspection/ Site Visit ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
• ရိုးသားကြိုးစား၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူဖြစ်ရမည်။
• Customer ၏လုပ်ငန်းအား ကောင်းမွန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ပြီး Analytic ၊ Research နှင့် ပတ်သက်သော တာဝန်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
• လုပ်ငန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ဖိစီးမှုများအောက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မှုရှိရမည်။
• လုပ်ငန်းတာဝန်များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပညာရှင် (Professional) ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
• တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘွဲ့တစ်ခုခု (Bachelor of Business Management, Commerce, Finance, Accounting, Economics and/or industry specific qualifications) ၊ Diploma in Sales/Marketing ရှိရမည်။
• ကွန်ပျူတာ (MS Office – Excel, Word) နှင့် E-mail ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ် ရမည်။
• အနည်းဆုံး လုပ်သက် (၁) နှစ်ရှိရမည်။
• Sales/Marketing ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
• မြန်မာဘာသာစကားကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆို၊ ဆက်ဆံ၊ ရေးသားနိုင်ရမည်။
• အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုနိုင်သူကို ဦးစားပေးမည်။
*ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင်ပါဝင်သူများကိုသာ အင်တာဗျူးအတွက် ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်သည်။*
Do you have at least 1 year experience with SME related loans ?
Do you have experience in sales, marketing and site inspection ?
Can you use email and Microsoft Office Suite proficiently ?